Hong Kong (Shina) · Avrily, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Hong Kong (Shina) · Avrily, 2012
Tantara mikasika ny Hong Kong (Shina) tamin'ny Avrily, 2012
Hong Kong: Manohitra Ny Volavolan-dalàna Fanovàna ireo Mpanakanto
Lalàna30 Avrily 2012
Eo an-dalàm-pametrahana ilay Volavolan-dalàna 2011 (fanovàna) Copyright (zon'ny mpamorona) any amin'ny Filan-kevitry ny Mpanao Lalàna mba hodinihana fanindroany amin'ny 9 Mey 2012 ny governemantan'ny RAS any Hong-Kong. Volavolan-dalàna manameloka ireo hetsika fandikana ny copyright amin'ny teknolojia rehetra izany raha toa ka "mihoatra ny fanimbana ara-toekarena bitika"
Afrika Mainty29 Avrily 2012
Hong Kong: Voarahona Ny Fahalalahana Ao Amin'ny Aterineto, Noraisin'ny Antoko 50 Cent Ny Fahefana
Shina04 Avrily 2012
Miaraka amin'ny fanampian'ny governemantan'i Beijing, nandresy tamin'ilay fifidianan'olom-bitsy tany Hong Kong ilay mpirotsaka ho fidiana ho Lehiben'ny Mpanatanteraka, Leung Chung-Ying. Nahazo vato miisa 689 tamin'ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-pifidianana i Leung. Manomboka ny antsojay atao amin'ireo mpitolona mitaky fifidianana demaokratika
Shina03 Avrily 2012
Amin'ireo tale mpanatanteraka 1.200 mpikambana amin'ny kaomitim-pifidianana ao Hong Kong, 689 no nifidy an'i Leung Chun-ying ho ny ben'ny tanàna manaraka ny 25 Martsa. Rehefa navoaka ny valim-pifidianana, an'arivony ireo mpanao fihetsiketsehana nanohitra ny fanodinkodinana ny fifidianana nataon'i Beijing teo ivelan'ny biraom-pifidianana vonjimaika.